LG G3 Prime bụ nsụgharị pụrụ iche nke G3 | Gam akporosis
LG G3 Prime na Snapdragon 805 pụtara na ndoputa na South Korea
Ndị mgbasa ozi Korea adịbeghị anya na-agbasa asịrị banyere nsụgharị pụrụ iche ma Samsung na LG ọnụ na-egosi ọsọ ọsọ na netwọk LTE. Site na Samsung ụdị a pụrụ iche ghọrọ Galaxy Prime nke mechara bụrụ Galaxy S5 LTE-A. A ọnụ na-eme nwere Quad HD Super AMOLED ihuenyo na a Snapdragon 805 mgbawa tụnyere 1080p na Snapdragon 801 nke Galaxy S5 nwere.
En Banyere G3 Prime nke LG Onweghi ihe a ma ama n'oge a, ewezuga asịrị gbasara mwepụta July. Ebe ọ bụ na G3 enweela ihuenyo Quad HD, naanị nkwalite enwere ike ịbụ mgbawa Snapdragon 805 inwe ya na S5 LTE-A n'onwe ya ..
Versiondị LG G3 Cat.6 apụtala nke ga-enwe njirimara ndị a kpọtụrụ aha, na-enwe ndoputa ya na South Korea. Na, ka banyere akụkụ «Cat. 6 »bụ na njirimara data gbara ọsọ karịrị 300 Mbps, kpọmkwem ọsọ nke ndị ọrụ na Korea nke LTE-A.
Ihe niile a ga - ekwe omume n'ihi na, ebe ejiri mgbapụta mara Snapdragon 801 nke Cat. 4 LTE modem nke nwere ike iru 150 Mbps, Snapdragon 805 ọhụrụ, bụ nke mbụ iji jikọta 300 Mbps Cat. 6 LTE. Ebumnuche ndị a na LG nwere ike ikwenye nke ahụ n'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ nsụgharị na Snapdragon 805 na Quad HD ihuenyo na shelf ụlọ ahịa, ọ bụ ezie na ihe anyị na-enweghị ike ịma bụ ma ọnụ ahịa ọhụrụ a ọ ga-abata mba ụwa.
Site na LG Greece, ọ dịbeghị anya ekwuru na ụdị pụrụ iche LG G3 Prime adịghị atụ anya, ọbụlagodi ọnwa atọ ọzọ, ya mere, anyị agaghị ama ihe ọ bụla ruo mgbe ọdịda ga-abịa. Anyị ga-ahụ otu LG si ewetara ha ụdị pụrụ iche nke G3.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G3 Prime na Snapdragon 805 pụtara na ndoputa na South Korea
Samsung Apps bụ ugbu a Galaxy Apps
0.9.0.dị XNUMX nke Minecraft Pocket Edition na ụwa na-enweghị njedebe, ọgba na ọtụtụ ndị ọzọ adịworị na Storelọ Ahịa Play